'श्वेता तिम्रो माइक अन छ' भन्ने किन भाइरल भइरहेछ ? कुरा यस्तो हो - Khabar Nepali
होमपेज / सूचना प्रविधि / ‘श्वेता तिम्रो माइक अन छ’ भन्ने किन भाइरल भइरहेछ ? कुरा यस्तो हो
‘श्वेता तिम्रो माइक अन छ’ भन्ने किन भाइरल भइरहेछ ? कुरा यस्तो हो
शुक्रबार, फागुन ०७, २०७७	, खबरनेपाली संवाददाता
अहिले सोशल मीडियामा एउटा जूम कल भिडियो निकै भाईरल भईरहेको छ। सो जूम कल भिडियोमा श्वेता नामकी केटीले एउटी महिला साथीसँग उनको केटा साथीको विगतको सम्बन्धको बारेमा कुरा गरिरहेकी हुन्छिन्। अनलाईन क्लास भईरहेको बेला श्वेताले माइक बन्द गर्न बिर्सिन्छिन् र उनको फोनको कुराकानी क्लासमा उपस्थित सबैले सुन्छन्। यो भाइरल भिडियोले अहिले सोशल मिडियामा तहल्का पिटिरहेको छ।
उक्त भाइरल जूम कल भिडियोमा १११ जना बढी विद्यार्थीहरू उपस्थित रहेका थिए। सो भिडियोमा श्वेता एक सहभागी साथी राधिका नाम गरेकी केटिसँग छुट्टै कलमा कुरा गरिरहेको देखिन्छ। तर श्वेताले माइक बन्द गर्न बिर्सिन्छिन् र उनको फोनको कुराकानी क्लासमा उपस्थित सबैले सुन्छन्।
भाइरल भिडियोमा, श्वेता कलमा केटाहरूको रोमान्टिक सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्छिन्। सो कलले सबैको ध्यान आकर्षण गर्‍यो किनभने श्वेताले केटाको सम्बन्धको बारेमा गहन विवरणहरू छलफल गर्छिन्। उनका सहभागी साथीहरुले उनलाई “श्वेता माइक अन छ” भनेर भन्छन् तर श्वेता केहि पनि सुन्दिनन्।
युट्युबमै अब फोरके भिडियो हेर्न सकिने
इन्टरनेट गुणस्तर प्रतिवेदनमा नेपाल पुछारमा
१२ जिबी र्याम भएको समासङको पहिलो फोल्डएबल स्मार्टफोन
लक्ष्मी बैंकले ल्यायो फोनलोन सेवा